Somaliand: 30 Sano Aqoonsi La’aan ah, Akhriso Sooyaalka iyo Sababta Gooni-u-goosashada? – Goobjoog News
Somaliland ayaa maanta xuseysa 30 sano kadib markii ay ka go’day jamhuuriyadda Soomaaliya 1991-dii, iyada oo weli aan helin aqoonsi.
Todobaadkan ayey aheyd markii madaxweyne Muuse Biixi uu ka qeyb galay caleemo saarka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, taasi oo qeyb ka ah dadaallada uu ugu jira inuu saameyn ku yeesho gobolka.
December sanadkii tagay waxaa caasumaad u fidiyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, booqashada Biixi ayaa waxaa ka dhashay isu soo dhowaanshiyo labada dhinac, waxaa intaas dheer Itoobiya oo heshiis horay ula gashay dekadda Berbera.
Somaliland waxaa ay haatan galeysaa doorasho iyada oo dunida, oo ay ugu horeeyaan deeq bixiyeyaasha iyo kuwa daneeya indhaha ku heyso sida ay u dhacdo codbixinta iyo hawlaha u qabsoomaan si hufan, xor yo xalaal ah.
Sidee ku timid Gooni isu taagga?
Shirk ka dhacay Burco 27dii April ilaa 5tii May 1991-dii, waxaa isugu yimid beelo ku abtirsada gobollada waqooyi sida Ciise, Gedabuursi, Warsengeli iyo Isaaqa, beesha dambe ayaa beelaha kale ka dhaadhiciyay in shir February sanadkaan ka dhacay Hargeisa la isku afgartay in lala soo noqdo dawladnimadii lixdankii.
Dib U Xusuuso Sida Midnimadii hore ku timid 1960: